ငယ်ရွယ်သောသြစတြေးလျမှညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်း (2017) - Your Brain On Porn
comments: သြစတြေးလျအသက်အရွယ် 15-29 အပေါ်လေ့လာမှုလူ 100% porn ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဒါဟာအစပိုပြီးမကြာခဏညစ်ညမ်းစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းကိုကြည့်ရှုခြင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
Aust NZJ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး။ 2017 ဇွန် 29 ။
Doi: 10.1111 / 1753-6405.12678 ။
Lim က MSc1, 2,3, Agius PA1, 2,4, Carrotte ER1, Vella AM1, Hellard ME1,2.
လူမှုရေးမီဒီယာကနေတဆင့်စုဆောင်း 15 နှစ် Victorian အသက် 29 တစ်ဦးအဆင်ပြေနမူနာအတွက် cross-section အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်။
အစဉ်အဆက်ကြည့်ရှုညစ်ညမ်း 815 ၏ 941 (87%) ပါဝင်သူများအားဖြင့်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမှာပျမ်းမျှအသက်မိန်းမတို့အဘို့ယောက်ျားနဲ့ 13 နှစ်ပေါင်း 16 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ပိုများသောမကြာခဏညစ်ညမ်းကြည့်ရှုစဉ်အဆက်စအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်မကြာသေးမီကစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများရှိခြင်း, အထီးလိင်, အသက်အရွယ်နုပျိုသောအသက်, အဆင့်မြင့်ပညာရေး, Non-လိင်ကွဲဝိသေသလက္ခဏာနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမှာငယ်ရွယ်သောအသက်ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များနှင့်မကြာသေးမီစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများမှာအထီးလိင်, အငယ်ကလက်ရှိအသက်အရွယ်အဆင့်မြင့်ပညာရေး, Non-လိင်ကွဲဝိသေသလက္ခဏာ, နုပျိုအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဘုံနှင့်အချို့သောကျန်းမာရေးနှင့်အမူအကျင့်ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်သည်။ longitudinal သုတေသနကဤအချက်များပေါ်တွင်ညစ်ညမ်း၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သက်ရောက်မှုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အများပြည်သူကျန်းမာရေးအတွက်သက်ရောက်မှု: ကိုကြည့်ရှုခြင်းညစ်ညမ်းလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်ထံမှလူငယ်များအကြားဘုံနှင့်မကြာခဏဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဤလိင်ပညာရေးအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။
သော့ချက်စာလုံးများ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ လိင်ကျန်းမာရေး၊ လိင်မီဒီယာ၊ လူငယ်များ
Pornography အသုံးပြုမှုကိုအများပြည်သူကျန်းမာရေးကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ငယ်ရွယ်သြစတြေးလျတို့တွင်လျင်မြန်စွာအင်တာနက်ကြီးထွားမှု, စမတ်ဖုန်းနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဘုံသည်နှင့်ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းထိတွေ့မှာပျမ်းမျှအသက်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းငြင်းဆန်ထားပါတယ်ဆိုလိုသည်။1 အစောပိုင်းနှင့်လယ်ပိုင်း 2000s ထံမှအစီရင်ခံစာများညစ်ညမ်းမှတသက်တာထိတွေ့မှု၏နှုန်းထားများဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအဘို့အ 73-93% နှင့်သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများ၏အဘို့အ 11-62% ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။1,2 အရည်အသွေးသုတေသနအများကြီးငယ်ရွယ်သြစတြေးလျညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့ရွယ်တူချင်းအကြားနေရာအနှံ့ယုံကြည်ကြောင်းညွှန်ပြ,3 အသက်အရွယ်ကြည့်ညစ်ညမ်း၏ 18 နှစ်အောက်လူတွေကိုတားမြစ်သည့်ဥပဒေများရှိနေသော်လည်း။4
ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. အဓိကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့သဘောထားတွေ, စံတန်ဖိုးလက်ခံနိုင်ဖွယ်နှင့်ကြိုးနေသော၎င်းတို့၏နားလည်မှုလွှမ်းမိုးသဖြင့်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။5 အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းကိုအပြုသဘောဖြင့်ရှုမြင်ပြီးလိင်မှုကိစ္စကိုစူးစမ်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်း၊6,7 ညစ်ညမ်းမကြာခဏအများအပြားလူကြီးများခေတ်ရေစီးကြောင်းအဖြစ်ရိပ်မိ, မပျော်စရာစဉ်းစားပါနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌မြင့်မားသောအန္တရာယ်များမှာမအပြုအမူတွေကိုသရုပ်ဖော်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအတွက်လိင်ကွဲတွေ့ဆုံသာ 2-3% ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုပါဝင်ပတ်သက်နေ။8,9
လိင်ကျန်းမာရေးအပေါ်ညစ်ညမ်း၏အလားအလာသက်ရောက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဖော်ပြစာပေ၏ကြီးထွားလာသောခန္ဓာကိုယ်ရှိပါသည်။10 လူငယ်များထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏အစစ်အမှန်ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများသို့ညစ်ညမ်း-မှုတ်သွင်းလေ့အကျင့်များထည့်သွင်းအဖြစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးပုံစံအဖြစ်ညစ်ညမ်း အသုံးပြု. သတင်းပို့ကြသည်။11,12 ဥပမာအားဖြင့်, အရည်အသွေးသုတေသနလိင်ကွဲတွေ့ဆုံနှင့်အတူညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများ၏ 15-32% တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်သောအချို့အမျိုးသမီးငယ်စအိုလိင်ဆက်ဆံအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖိအားပေးခံရခံစားရကြောင်းညွှန်ပြ,8,9 နှင့်များစွာသောသူတို့၏ဖိအားသည်၎င်းတို့၏အမျိုးသားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုဖော်ပြသည်။13 နိုင်ငံတကာမှာ, longitudinal သုတေသနညစ်ညမ်းမှအစောပိုင်းထိတွေ့မှုနှင့်ထို့ထက် ပို. မကြာခဏထိတွေ့ခြင်းကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်, နှစ်ဦးစလုံးမြီးကောင်ပေါက်အကြားအသက်အရွယ်နုပျိုသောအရွယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏စတင်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။14,15 မကြာသေးမီကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစားသုံးသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ပြသ;16 မြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုချိတ်ဆက်သက်သေအထောက်အထားရောထွေးဖြစ်ပါတယ်။17
ကျန်းမာရေးမူဝါဒနှင့်လိင်ပညာရေးအကြောင်းကြားရန်, ကညစ်ညမ်းသုံးပါနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ကျန်းမာရေးသုခချမ်းသာအပေါ်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ဘယ်လိုလူငယ်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ စမတ်ဖုန်းခေတ်ထဲမှာလူကြီးသို့ကူးပြောင်းမြီးကောင်ပေါက်ပါဝင်သောညစ်ညမ်းသုတေသနကန့်သတ်သည်, သြစတြေးလျအခြေအနေတွင်မျှမမကြာသေးမီလေ့လာမှုများရှိခဲ့ပါပြီ။ ထိတွေ့မှုမှာအသက်အရွယ်နှင့် ပတ်သက်. ရရှိနိုင်မကြာသေးမီအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးနည်းပါး, ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်လူငယ်များကအသုံးပြုထိတွေ့မှုနှင့် Modes သာ၏ကြိမ်နှုန်းရှိပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုကငယ်ရွယ်သြစတြေးလျ၏တစ်ဦးအဆင်ပြေနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ပျံ့နှံ့မှုကတင်ပြထားပါတယ်။ ဒါဟာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းများကျား, မများကတည်းဖြတ်ထားတဲ့ရန်ပထမဦးဆုံးကြည့်ရှုမှာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်အချက်များနှင့်အတိုင်းအတာစူးစမ်း။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးကြည့်ရှုညစ်ညမ်းမှာကိုပိုပြီးမကြာခဏနှင့်ငယ်ရွယ်သောအသက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်မှုလုလင်တို့သည်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကျား, မများကကွာခြားစေမည်အကြောင်းဆက်စပ်လျက်ရှိသော hypothesise ။
ဒီဇိုင်းနှင့်နမူနာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှမတ်လအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့သောအသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်သားများကိုလေ့လာနိုင်သောအွန်လိုင်းကဏ္surveyတွင်ပါ ၀ င်သောလေ့လာမှုဖြစ်သည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီမှုကိုကိုယ်တိုင်လစဉ်မွေးဖွားသည့်လ၊ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုသည်လူမှုရေးမီဒီယာကို အသုံးပြု၍ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှလာသောကြော်ငြာများ၊ အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အတွင်းရှိဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်များသို့ညွှန်ကြားထားသည့်အပြင်သုတေသီများ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကွန်ယက်များမှတဆင့်မျှဝေထားသောကြော်ငြာများပါဝင်သည်။ ကြော်ငြာများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော်လည်းစစ်တမ်းကိုလိင်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားသည်။ သင်တန်းသားများသည်လူ ဦး ရေစာရင်း၊ လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အပြုအမူများနှင့်အခြားကျန်းမာရေးအပြုအမူများပါ ၀ င်သည့်အွန်လိုင်းမေးခွန်းလွှာကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ မေးခွန်းလွှာကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ လူငယ်များထံမှအန္တရာယ်နှင့်ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းထားသည့် 'Sex, Drug and Rock'n'Roll' လေ့လာမှုမှအဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။18 သင်တန်းသားများကိုလက်ဆောင်တစ်ခုဘောက်ချာအနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အတည်ပြုချက်အဲဖရက်ဆေးရုံလူ့သုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီကခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
လူ ဦး ရေစာရင်းအရကျား၊ မ၊ လိင်၊ လိင် (သို့) အခြားနှင့်ကျား၊ မနှင့်မွေးသက္ကရာဇ်တို့ပါဝင်သည်။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအမျိုးမျိုးခံစားခဲ့ရသည့်အသက်အရွယ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဒီအပြုအမူမှာဘယ်တော့မှမခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ; ဤအပြုအမူများတွင်မိတ်ဖက်၏လိင်အင်္ဂါများကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ခြင်း၊ သင့်လက်တွဲဖော်အားလက်တွဲဖော်အားဖြင့်ထိတွေ့ခြင်း၊ ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ နှုတ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါမှလိင်ဆက်ဆံခြင်း (လိင်တံတွင်လိင်တံ) နှင့်စအိုလိင် (စအို၌လိင်တံ) တို့ပါဝင်သည်။ ဤစာတမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်“ လိင်ဆက်ဆံခြင်း” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်ဤအပြုအမူခြောက်ခုကိုရည်ညွှန်းရန်အသုံးပြုသည်။ 'လိင်ဆက်ဆံခြင်း' သည်လိင်အင်္ဂါသို့မဟုတ်စအိုလိင်ကိုသာရည်ညွှန်းသည်။
သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်နှင့်စပ်လျဉ်းလေးမေးခွန်းများကိုမေးသော်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, (ညစ်ညမ်းမရှိတိကျတဲ့ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မေးခွန်းလွှာအတွက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်):
သင်ပထမဦးဆုံးညစ်ညမ်းမြင်သောအခါသင်တို့ကိုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ (ကြည့်ရှုအားပေးဘယ်တော့မှတစ်ခု option ကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်)
ပြီးခဲ့သည့် 12 လအတွင်း, ဘယ်လိုမကြာခဏသင်သည်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းရှုမြင်ခဲ့တာလဲ '' ဘယ်တော့မှမ ',' လစဉ်ထက်လျော့နည်း ',' လစဉ် ',' အပတ်စဉ် 'သို့မဟုတ်' 'နေ့စဉ် / နီးပါးနေ့စဉ်' '။
သင်ဘယ်လိုများသောအားဖြင့်ဒီရှုမြင်ခဲ့တာလဲ '' မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်လုပ် / ထုတ်လွှင့် ',' ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်လုပ် / ထုတ်လွှင့် ',' DVD ကို ',' တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ webcam ',' မဂ္ဂဇင်း / စာအုပ်များ 'သို့မဟုတ်' 'နဲ့အခြား' '
အဘယ်သူကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုအများအားဖြင့်ဒီရှုမြင်ခဲ့တာလဲ '' သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ',' တနာတစ်ဦးနှင့်အတူ 'သို့မဟုတ်' ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ် ''
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်, '' အပတ်စဉ် 'နဲ့' နေ့စဉ် / နီးပါးနေ့စဉ် '' အပတ်စဉ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို '' အဖြစ်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။
အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံက - 15 နှစ်သို့မဟုတ်အငယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (အထကျစာရင်း) ၏မည်သည့်အတွက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပထမဆုံးအစီရင်ခံသူများသည်ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်မှာလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်ရှိခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။
စအိုလိင်ဆက်ဆံ - အစဉ်အဆက်အတွေ့အကြုံရှိစအိုလိင်ဆက်ဆံနေတဲ့ binary variable ကိုအဖြစ်ဆက်ဆံခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ် - လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု (ကာလသား) ၏စွန့်စားခြင်းမရှိ, အနိမ့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုနှင့်အတူသူတို့အား trichotomised ခဲ့သည်; မဆိုနှင့်အတူကွန်ဒုံးမသုံးဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းသတင်းပို့သင်တန်းသားများ: အတိတ် 12 လအတွင်းအသစ်သောမိတ်ဖက်, ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်တစ်ဦးထက်ပိုမိတ်ဖက်ပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ်မှာအဖြစ်ခွဲခြားကြသည် ဟူ. ၎င်း, လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပေမယ့်အမြဲကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုသို့မဟုတ်မှသာအတိတ်နှစျတှငျတစျခုပုံမှန်အစည်းအဝေးမိတ်ဖက်အနိမ့်အန္တရာယ်အဖြစ်ကုသခံခဲ့ရသည်အစီရင်ခံခဲ့သောသူတို့အား, လိင်ဆက်ဆံခြင်းမဆိုအတွေ့အကြုံကသတင်းပို့မဟုတ်သင်တန်းသားများကိုအန္တရာယ်မှာဖြစ်ဖို့မစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းအဘယ်သူမျှမအတွေ့အကြုံနှင့်အတူသူများသည်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ရည်ညွှန်းအဖြစ်ကုသခံခဲ့ရသည်။
စိတ်ကျန်းမာရေး - ပါ ၀ င်သူများအား“ လွန်ခဲ့သောခြောက်လအတွင်းသင်သည်စိတ်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများကြုံခဲ့ဖူးပါသလား။ ဒီဟာကမင်းမှာကျန်းမာရေးပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့မပြောရသေးတဲ့ပြissuesနာတွေပါပါတယ်။ ”
Living အခွအေနေ - သင်တန်းသားများကိုသူတို့နှင့်အတူနေသောညွှန်ပြ; ဤသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်နှင့်အတူအသက်ရှင်မပြုခဲ့သောသူတို့အား dichotomised ခဲ့သည်။
ပညာရေး - သင်တန်းသားများကိုသူတို့ပြီးစီးခဲ့ပြီးပညာရေး၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုညွှန်ပြ။ ဒါဟာမဆို Post-အထက်တန်းကျောင်းပညာရေးသို့မဟုတ်မ dichotomised ခဲ့သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထား - သင်တန်းသားများကိုသူတို့၏လိင်ပိုင်းဝိသေသလက္ခဏာညွှန်ပြ။ ဤသည်လိင်ကွဲသို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူ, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုး, မေးမြန်း, queer သို့မဟုတ်အခြား (GLBQQ +) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာမှ dichotomised ခဲ့သည်။
အရေးပေါ်စားပွဲပေါ်မှာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလူဦးရေ, ကျန်းမာရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး-related အန္တရာယ်အပြုအမူများနှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ပုံစံများများအတွက်ပျံ့နှံ့၏ခန့်မှန်းချက်များကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏လက်ရှိအကြိမ်ရေ၏ဆက်စပ်မှုအချိုးကျလေးသာမှု Logistic ဆုတ်ယုတ်သုံးပြီးဆုံးဖြတ်ထားကြသည် ဟူ. ၎င်း, (အားလုံးလွတ်လပ်သော variable တွေကိုအပါအဝင်) bivariate နှင့် multivariate နှစ်ဦးစလုံး။ တိကျသောအချက်များများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကျား, မများကတည်းဖြတ်ပေးခဲ့သည်ရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းရန်, အပြန်အလှန်အသုံးအနှုန်းများနှင့်အတူလျော့နည်းကျပ်မော်ဒယ်များမော်ဒယ်အတွက်ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ ယင်းအချိုးကျလေးသာမှုယူဆချက်အဆိုပြုထားမော်ဒယ်များအတွက်တိကျသောအချက်တစ်ချက်သက်ရောက်မှုများအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမခံခဲ့ရဘယ်မှာ (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏အဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီးကွဲပြားအချက်များ၏လွတ်လပ်သောသက်ရောက်မှု), General linear နှင့်ငုပ်လျှိုးနေရောထွေးမော်ဒယ် (gllamm)19 ယင်းအချိုးကျလေးသာသတ်အပန်းဖြေနိုင်ရန်အတွက် covariate တိကျတဲ့တံခါးခုံ logit ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များသတ်မှတ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Brant စမ်းသပ်မှု20 နှင့်အသိုက် gllamm မော်ဒယ်များအကြားဖြစ်နိုင်ခြေကိုအချိုးစမ်းသပ်မှု (ဒီထက်ကျပ်မော်ဒယ်များကိုရှေးခယျြအချက်များများအတွက်အချိုးကျလေးသာမှုယူဆချက်လျှော့ပေါ့) ဒေတာအချိုးကျလေးသာမှုဆုတ်ယုတ်ယူဆချက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရှိမရှိအပေါ်စာရင်းအင်းအခြများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမှာအသက်ဆက်စပ်မှု, ကော့အချိုးကျအန္တရာယ်ဆုတ်ယုတ်သုံးပြီးဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်21 အကောင့်ထဲသို့စစ်တမ်း၏အချိန်မှာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်သေးဘူးသောသူသင်တန်းသားများကိုလေ့လာဖို့ကြောင့်ဒေတာအတွက်မွေးရာပါစီစစ်ဖြတ်တောက်တာ။ အဓိကသက်ရောက်မှုအပြင်, အပြန်အလှန်အသုံးအနှုန်းများကိုလည်းသက်ရောက်မှုကျား, မများကတည်းဖြတ်ပေးခဲ့သည်သောအတိုင်းအတာစူးစမ်းဤရှင်သန်မှုမော်ဒယ်များအတွက်ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းကြည့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှာပျမ်းမျှအသက်လည်းဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြု. ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။
တစ်ဦးကပြည့်စုံမှုကိစ္စချဉ်းကပ်ပုံသော့ချက်ထိတွေ့အချက်များမဆိုအပေါ်ပျောက်ဆုံးနေဒေတာနှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်ရာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ Stata စာရင်းအင်းအထုပ်ဗားရှင်း 13.1 သုံးပြီးကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
စစ်တမ်းကောက်ယူ 1,001 လူတို့တွင်ကိုးလိင်သို့မဟုတ် 'နဲ့အခြား' 'ကျားအဖြစ်ဖော်ထုတ်ပေမယ်ကြောင့်ထိုအအုပ်စုများအတွက်သေးငယ်တဲ့ဂဏန်းမှဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်မပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကထပ်မံ 26 သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေတုံ့ပြန်မ 25 key ကို covariates အပေါ်ပျောက်ဆုံးဒေတာကိုပြခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။ key ကို covariate data တွေကိုပျောက်ဆုံးသူများသည်သိသိသာသာ (ကြည့်ရှုညစ်ညမ်း၏ကြိမ်နှုန်းအပေါ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွင်ထည့်သွင်းရှိသူများအနေဖြင့်ကွဲပြားဘူးpပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမှာ = 0.555) သို့မဟုတ်အသက်အရွယ် (p= 0.729) ။
အဆိုပါ 941 သင်တန်းသားများ၏ 73% အမျိုးသမီးခဲ့ကြသည်နှင့်ပျမ်းမျှအသက်အရွယ်ယောက်ျားများအတွက်အမျိုးသမီးများနှင့် 20 နှစ်ပေါင်း (IQR 17-24) အတွက် 21 နှစ်ပေါင်း (IQR 19-25) ကြီးပါဝင်သည်။ စားပှဲ 1 ဖြေဆိုသူဝိသေသလက္ခဏာများပြသထားတယ်။ အစဉ်အဆက်တစ်ဖက်နှင့်အတူမည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ဘဲလျက်အစီရင်ခံတင်ပြသူကို 804 ပါဝင်သူများအနက်ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်မှာပျမ်းမျှအသက် 16 နှစ်ပေါင်း (IQR 16-17) လူတို့သညျအဘို့အအမျိုးသမီးများနှင့် 16 နှစ်ပေါင်း (IQR 16-16) အတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အစဉ်အဆက်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဘဲလျက်အစီရင်ခံတင်ပြသူကို 710 ပါဝင်သူများအနက်ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှာပျမ်းမျှအသက် 17 နှစ်ပေါင်း (IQR 17-18) လူတို့သညျအဘို့အအမျိုးသမီးများနှင့် 18 နှစ်ပေါင်း (IQR 17-18) အတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဇယား ၁။ လူမှု - လူ ဦး ရေအချိုးအစား၊ ကျန်းမာရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူလက္ခဏာများနမူနာ - အရေအတွက် ()) နှင့်ရာခိုင်နှုန်း (%) (= = ၉၄၁) ။
မဆိုစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာ, အတိတ်6လအတွင်း
အစဉ်အဆက်ကြည့်ရှုညစ်ညမ်း 815 (87%) ပါဝင်သူများအားဖြင့်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ အထီးပါဝင်သူအမျိုးသမီးပါဝင်သူ (စားပွဲတင်ထက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ် 2) ။ အများစုမှာပါဝင်သူ (ဎ = 629, 87%) များသောအားဖြင့်စောင့်ကြည့်တယောက်တည်းသာညစ်ညမ်းဆုံးနဲ့အများအားဖြင့်ထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးသို့မဟုတ်ဖုန်းပေါ်သို့ညစ်ညမ်းဒေါင်းလုပ်လုပ်။ ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမှာပျမ်းမျှအသက်အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများအဘို့အ 13 အထီးသင်တန်းသားများအဘို့အနှစ် (95% CI = 12-13) နှင့် 16 နှစ်ပေါင်းခဲ့ (95% CI = 16-16; p
ဇယား ၂။ လိင်စိတ်အရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း - အရေအတွက် (n) နှင့်ရာခိုင်နှုန်း (%) ။
အမျိုးသမီးဎ (%) ဎ = 683
အထီးဎ (%) ဎ = 258
စုစုပေါင်းဎ (%) ဎ = 941
အစဉ်အဆက်ကြည့်ရှုအားပေးညစ်ညမ်း 558 (82) 257 (100) 815 (87)
အစဉ်အဆက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးသူတို့တွင် ဎ = 558 ဎ = 257 ဎ = 815
အဆိုပါ 12 လအတွင်းကြည့်ရှု၏ frequency လေ့လာရန်ကြိုတင်
လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးသူတို့တွင် N ကို = 465 N ကို = 255 N ကို = 720
ကြည့်ရှုညစ်ညမ်းအများစုဟာဘုံ mode ကို
ဖုန်းပေါ်မှာ stream / download,
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ stream / download,
ဒီဗီဒီ / webcam / မဂ္ဂဇင်း / စာအုပ်
အခြားအ / / ပျောက်ဆုံးမဖော်ပြထားဘူး
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပထမကြည့်နေစဉ်တွင်ပါဝင်သူများ၏အသက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကအသက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ လေးဆယ့်လေးယောက် (၅%) ပါဝင်သူများကညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမည်သည့်အခါမျှမကြည့်ဖူး၊ မည်သည့်လိင်မှုကိစ္စနှင့်မျှမတွေ့ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ၅၃၆ (၅၇%) သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုမတိုင်မှီညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး ၈၀ (၉%) သည်အသက်အရွယ်တူ။ ၂၈၁ ဦး (၃၀%) နှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအပြာရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းတို့၏ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုတွင်နုပျိုခဲ့ကြသည်။
Brant စမ်းသပ်မှုχ (သတ်မှတ်ထားသောမော်ဒယ်အချိုးကျလေးသာမှု၏ယူဆချက်ဒေတာပေးထားကျိုးကြောင်းဆီလျော်မဟုတ်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွခဲ့2(20) = 50.3; p<0.001) ။ လိင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ် (χ2(2) = 11.8; p= 0.003) နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး (χ2(2) = 5.7; p= 0.05) အချက်များ Non-အချိုးကျသက်ရောက်မှုပြ။ ဒီအကြိုးသကျရောအချိုးညီမျှမှု (ဆိုလိုသည်မှာလိင်ပိုင်းအန္တရာယ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအချက်များအဘို့အ) ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပန်းဖြေအတူအချိုးကျလေးသာမှုဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်သိသိသာသာအပြည့်အဝကျပ်မော်ဒယ်ထက်ပိုကောင်းမထိုက်မတန်ပြသကြောင်းပြသရာ gllamm မော်ဒယ်ကနေဖြစ်နိုင်ခြေကိုအချိုးစမ်းသပ်ခြင်း, (LR χအားဖြင့်ကစာရင်းအင်းထောက်ခံခဲ့သည်2(6) = 31.5; p<0.001) ။ ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အကန့်အသတ်မရှိသောပုံစံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
စားပှဲ3ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုကြိမ်နှုန်း၏ဆက်စပ်မှု gllamm မော်ဒယ်ကို အသုံးပြု. ပြသထားတယ်။ အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများကိုအထီးသင်တန်းသားများကို (; 0.02% CI = 95-0.01 AOR = 0.12) ကိုနှိုင်းယှဉ်မကြာခဏညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့သိသိသာသာလျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ (; 3.04% CI = 95-2.20 AOR = 4.21) ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလိင်ကွဲသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ် GLBQQ + ဖြစ်နှင့်သောသူတို့ပိုပြီးမကြာခဏညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့သုံးကြိမ်ထက်ပိုနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းပြသ; ပိုပြီးမကြာခဏသာအလယ်တန်းပညာရေးနှင့်အတူများထက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်; နဲ့ post-secondary ပညာရေးရှိသူများ 48% ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ် (1.48% CI = 95-1.01 AOR = 2.17) တို့ဖြစ်သည်။ စအိုလိင်ဆက်ဆံတစ်ခုအတွေ့အကြုံကိုအစီရင်ခံသူများသည်ပိုပြီးမကြာခဏညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည် (AOR = 1.50; 95% CI = 1.09-2.06); သို့သော်စအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်ကျားမအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်၏, ခန့်မှန်းချက် (AOR = 2.47; 95% CI = 1.03-5.90; Wald χ2(1) = 4.14; pAOR = 0.042, 0.70% CI = 95-0.33):; အမျိုးသမီးတွေကို AOR = 1.45, 1.72% CI = 95-1.12: = 2.63) ဒီအသင်းအဖွဲ့သာ (ယောက်ျားမိန်းမတို့အားချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ပြသခဲ့သည်။ ကျားမနှင့်လိင်ဝိသေသလက္ခဏာအကြားတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိသိသာအပြန်အလှန် (Wald χရှိခဲ့သည်2(1) = 2.29; p= 0.13) သို့မဟုတ်ကျားမနှင့်လူနေမှုအခြေအနေ (Wald χ2(1) = 0.17; p= 0.68) ။
ဇယား ၃ ။p-values) (ဎ = 941) †။
†မော်ဒယ်ဖြတ် - မှတ် - k1 = -3.49, k2 = -2.84, k3 = -1.80
အမြိုးသမီး 0.05 (0.04-0.07) 0.03 (0.02-.05)
နှစ်များတွင်အသက်အရွယ် 1.21 (1.01-1.07) 0.006 0.97 (0.92-1.02) 0.227
မိတ်ဖက်နှင့်အတူ Living 0.74 (0.55-1.00) 0.048 0.76 (0.51-1.12) 0.167
အထက်တန်းပညာရေး post 1.53 (1.20-1.95) 0.001 1.48 (1.01-2.17) 0.042
GLBQQ + ဝိသေသလက္ခဏာ 2.10 (1.62-2.73) 3.04 (2.20-4.21)
ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှု <၁၆ နှစ် 1.17 (0.93-1.48) 0.176 1.11 (0.84-1.49) 0.454
အစဉ်အဆက်စအိုလိင်ဆက်ဆံခဲ့ 1.78 (1.40-2.27) 1.50 (1.09-2.06) 0.013
အဘယ်သူမျှမစွန့်စားမှု - - - - ref - ref - ref -
အနိမျ့အန္တရာယ် - - - - 1.92 (1.23-2.98) 0.004 1.12 (.73-1.71) 0.598 0.81 (0.51-1.29) 0.375
မြင့်မားသောအန္တရာယ် - - - - 2.45 (1.44-4.16) 0.001 0.86 (0.53-1.42) 0.564 0.74 (0.43-1.28) 0.283
စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာ, အတိတ်6လအတွင်း - - - - 1.65 (1.18-2.31) 0.003 1.18 (0.86-1.62) 0.293 1.52 (1.06-2.18) 0.022
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ; သို့မဟုတ်မြင့်မားသောစွန့်စားမှု (1.91% CI = 95-1.23 AOR = 2.98); အတွေ့အကြုံရှိလိင်ဆက်ဆံခြင်းဘယ်တော့မှခဲ့သောသူတို့က, အနိမ့်စွန့်စားမြားတှငျပါဝငျခွငျးခံရဖို့စဉ်းစားလိင်တက်ကြွစွာပါဝင်သူ (2.45% CI = 95-1.44 AOR = 4.16) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ အပြုအမူလစဉ်ထက်လျော့နည်းညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ပေမယ့်ဒီအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးပိုပြီးမကြာခဏညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏အလေးသာမကွဲပြားမှုရှိကြ၏။ အလားတူပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုကြိမ်နှုန်း၏အဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီးစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောခြောက်လအတွင်းစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၏အဘယ်သူမျှမကဖော်ပြခဲ့သည်သမိုင်းနှင့်အတူရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤကာလအတွင်းစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုသတင်းပို့ရှိသူများလစဉ် (; 65% CI = 1.65-95 AOR = 1.18) ထက်လျော့နည်းညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အစီရင်ခံရန် 2.31% ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏ နှင့် 52 ပိုပြီးမကြာခဏအပတ်စဉ်သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ဖို့% ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ် (AOR = 1.52; 95% CI = 1.06-2.18) ။
စားပှဲ4ပထမဦးဆုံးကြည့်ရှုညစ်ညမ်းမှာအသက်ဆက်စပ်ပြသည်။ ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမှာငယ်ရွယ်သောအသက်အထီးရှိနသောသူသင်တန်းသားများကိုအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ် multivariable ကော့ဆုတ်ယုတ်မှာတော့လက်ရှိအငယ်, လက်ရှိမိတ်ဖက်နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်, အထက်တန်းကျောင်းပြီးစီးခဲ့မပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်မှာငယ်ရွယ်သောအသက်ခဲ့သူတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကစိတ်ကျန်းမာရေးအစီရင်ခံတင်ပြ ပြဿနာ။ GLBQQ + လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာအစီရင်ခံသူများသည်လည်းအငယ်အရွယ်ကနေညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည် (AOR = 1.25; 95% CI = 1.05-1.48); သို့သော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကျားမအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်၏, ခန့်မှန်းချက် (AOR = 2.08; 95% CI = 1.43-3.02; Wald χ2(1) = 14.6; p<0.01)) ဒီအသင်းအဖွဲ့သာအမျိုးသမီးများအတွက်ချုပ်ထားခဲ့သည်ပြသ (ယောက်ျား: AHR = 0.72, 95% CI = 0.50-1.04; အမျိုးသမီးများ: AOR = 1.63, 95% CI = 1.34-1.99) ။
ဇယား ၄။ ပထမဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်း၏အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်မှု - ကော့အချိုးကျအန္တရာယ်များကိုပြန်လည်ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကချိန်ညှိမှုမရှိခြင်း (HR) နှင့်ချိန်ညှိထားသော (AHR) အန္တရာယ်အချိုးများ၊ ၉၅% ယုံကြည်မှုကြားကာလ (4% CI) နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေတန်ဖိုးများ (p-values) ။
အမြိုးသမီး 0.26 (0.22-0.31) 0.20 (0.17-0.24)
နှစ်များတွင်အသက်အရွယ် 0.94 (0.93-0.96) 0.92 (0.90-0.95)
မိတ်ဖက်နှင့်အတူ Living 0.84 (0.70-1.01) 0.060 1.29 (1.04-1.59) 0.019
အထက်တန်းပညာရေး post 0.66 (0.57-0.77) 0.78 (0.64-0.95) 0.015
GLBQQ + ဝိသေသလက္ခဏာ 1.34 (1.15-1.57) 1.25 (1.05-1.48) 0.010
ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှု <၁၆ နှစ် 1.64 (1.42-1.88) 1.55 (1.33-1.82)
အစဉ်အဆက်စအိုလိင်ဆက်ဆံခဲ့ 1.21 (1.05-1.40) 0.009 1.17 (0.98-1.38) 0.077
အနိမျ့အန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 0.95 (0.80-1.14) 0.595 1.08 (0.87-1.33) 0.494
မြင့်မားသောအန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 1.11 (0.91-1.35) 0.312 1.16 (0.91-1.48) 0.226
စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာ, အတိတ်6လအတွင်း 1.12 (0.97-1.28) 0.113 1.20 (1.04-1.40) 0.014
ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းအထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့လူတို့တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာများတွင်လူငယ်များအကြားဘုံအလေ့အကျင့်ပါပဲ။ လုလင်တို့သည်နှင့်လူငယ်အမျိုးသမီးများ 82% ရာခိုင်နှုန်းတရာအစဉ်အဆက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမှာပျမ်းမျှအသက်မိန်းမတို့အဘို့ယောက်ျားနဲ့ 13 နှစ်ပေါင်း 16 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှစ်ဆယ်လေးလူပျို၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်လူငယ်အမျိုးသမီးများ 19% အပတ်စဉ်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာညစ်ညမ်း watched ။ 2012-2013 အတွက်ကောက်ယူကျန်းမာရေးနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်ဒုတိယအသြစတြေးလျလေ့လာမှု, ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ကြိမ်နှုန်းသို့မဟုတ်အသက်အရွယ်မပါဝင်ဘဲ, သို့သော်သူကလူငယ်များ၏အနိမ့်အချိုးအစားအစဉ်အဆက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ: 84-16 အသက်ယောက်ျား၏ 19%; 89-20 အသက်ယောက်ျား၏ 29%; 28-16 အသက်အမျိုးသမီးများ၏ 19%; 57-20 အသက်အမျိုးသမီးများနှင့် 29% ။22 အခွားသောသြစတြေးလျလေ့လာမှုများမကြာသေးမီကညစ်ညမ်းထိတွေ့လူများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ 2012-13 ခုနှစ်, ကျော်ယောက်ျားနဲ့ 63 နှစ်ပေါင်းအသက်အမျိုးသမီးများ၏ 20% နှင့်များ၏ 16% အတိတ်နှစျတှငျညစ်ညမ်းပစ္စည်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသည်။23 နှိုင်းယှဉ်မှု၌, 2001-02 အတွက် 17 ယောက်ျား၏% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 12% အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်က်ဘ်ဆိုက်သွားရောက်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။24 ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသြစတြေးလျ၏ရာခိုင်နှုန်းအသက်အရွယ် 16 အစောပိုင်း 37s အတွက်% 1950 ဖို့ 79s အတွက် 2000% ကနေတိုးမြှင့်မီ။1
အမျိုးသမီးများနေ့ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ယောက်ျားထက်လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်, လျော့နည်းမကြာခဏစောင့်ကြည့်ခြင်း, ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အဟောင်းတွေအသက်အရွယ်မှာစောင့်ကြည့်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက်တစ်အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ခံရဖို့ကပိုများပါတယ်အစီရင်ခံကြောင်းအမေရိကန်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီသည်။25 ယောက်ျားညစ်ညမ်းတာ သာ. ကြီးမြတ်စားသုံးသူခဲ့ကြသည်နေစဉ်, ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းအများစု (82%) များသောအားဖြင့်တစ်ဦးတည်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် 84% မှာအနည်းဆုံးအပတ်စဉ်စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုသတင်းပေးပို့သူကိုအမျိုးသမီးငယ်၏ 22% အကြားကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ ဤသည်ကိုမှန်မှန်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်တဲ့သူအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးသိသိသာသာအရေအတွက်ကိုရှိပါတယ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အတိတ်သုတေသနဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများထက်ညစ်ညမ်းဆီသို့ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်သဘောထားများသတင်းပို့ကြောင်းပြသတော်မူပြီ သူတို့အဟောင်းတွေကြီးထွားအဖြစ်သို့သော်မိန်းကလေးများ ပို. ပို. အပြုသဘောဆောင်သဘောထားများရှိသည်။25
ကျနော်တို့တိုးလာညစ်ညမ်း GLBTIQQ + လူငယ်များကြားတွင်ကြည့်ရှုတွေ့၏ ဒီယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီသည်။26,27 ဤသည်တွေ့ရှိချက်ညစ်ညမ်းမှတဆင့်ဤအချက်အလက်ရယူရန်လိုအပ်နေရရှိလာတဲ့ non-heteronormative လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူန်းကျင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းယဉ်ကျေးမှု၌အချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။28 ဥပမာအားဖြင့်, လိင်တူချင်းတစ်ဦးအရည်အသွေးလေ့လာမှုမှာဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများဆွဲဆောင်, သင်တန်းသားများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့် function ကိုအကြောင်းကိုအတူတူ-ကျားမလိင်များ၏စက်ပြင်သင်ယူဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာသင်ယူရန်နှင့်လိင်အတွက်ခံစားရသင့်တယ်ဘယ်လိုနားလည်ရန်ညစ်ညမ်း အသုံးပြု. သတင်းပို့ အပျော်အပါးနှင့်နာကျင်မှုအသုံးအနှုန်းများ။6
မိန်းမတကာတို့ထက် ပို. မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအစဉ်အဆက်စအိုလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဘဲလျက်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အတိတ်သုတေသနအမျိုးသမီးတချို့စအိုလိင်ဆက်ဆံပျြောမှေ့စကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီ သို့သော်အမျိုးသမီးများသည်ယောက်ျားခြုံငုံလုပ်ပေးထက်လျော့နည်းပျြောမှေ့စစအိုလိင်ဆက်ဆံရှာဖွေတာသတင်းပို့ပါ။29 တဦးတည်းအရည်အသွေးလေ့လာမှုမှာ, အမျိုးသမီးများညစ်ညမ်းအတွက်စအိုလိင်ဆက်ဆံမြင်ဘူးသူကိုအထီးမိတ်ဖက်များကစအိုလိင်ဆက်ဆံသို့ဖိအားပေးသို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်ခံရသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။13 ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာ, စအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်ညစ်ညမ်းအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများကိုသော်လည်းမအထီးသင်တန်းသားများအဘို့အတွေ့သောစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဖြစ်နိုင်ပါ့မလားရှင်းလင်းချက်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူပိုမိုစိတ်ဝင်စားသို့မဟုတ်စအိုလိင်ဆက်ဆံကြိုးစားနေအကြောင်းကိုစပ်စုဖြစ်နိုင်သည်သောမိန်းမတို့ကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ကပိုများပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်; တနည်း, ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သူအမြိုးသမီးမြားစအိုလိင်ဆက်ဆံသူတို့ရဲ့အထီးမိတ်ဖက်များကသူတို့ထဲကမျှော်လင့်ထားကြောင်းထင်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိပါလိမ့်မည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူစားသုံးသူနှငျ့ပတျသကျသောလေ့လာမှုတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အန္တရာယ်မကင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်မြင့်မားနံပါတ်များအကြားလင့်များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။16 မြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုချိတ်ဆက်သက်သေအထောက်အထားရောထွေးဖြစ်ပါတယ်။17 မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်များ၏အချို့လေ့လာမှုများညစ်ညမ်းနှင့်ပိုပြီးတစ်သက်တာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များအကြားအသင်းအဖွဲ့များပြသခဲ့ကြသည်။30,31 လေ့လာမှုတစ်ခုအဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအထီးအဘို့ဖြစ်သည်မဟုတ်အမျိုးသမီးများအတွက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် Non-ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့အဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏ငယ်ရွယ်သောအသက်အရေအတွက်အကြားမျှအသင်းအဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။27 တခြားလေ့လာမှုပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုများအကြားမျှဆက်စပ်မှုတွေ့ပြီ။32 လက်ရှိလေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမှာငယ်ရွယ်သောအသက်နှင့်မကြာသေးမီကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူအကြားမျှဆက်စပ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းလိင်အတွေ့အကြုံဖြစ်နှင့်သောသူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နိမ့်အန္တရာယ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုခုအတွက်စေ့စပ်သောသူတို့အားမှာအားလုံးကြည့်ရှုမနှိုင်းယှဉ်လစဉ်ထက်လျော့နည်းညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပိုမိုအလေးသာရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပိုပြီးမကြာခဏ (လစဉ်အပတ်စဉ်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်) ညစ်ညမ်းအကဲခတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူအတွက်ကွဲပြားမှုနဲ့ဆက်စပ်မရခဲ့သည်။ တခြားလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများနှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်နှုန်းအကြားဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးကြပြီမဟုတ်, ဒါကြောင့်နောက်ထပ်သုတေသနလစဉ်ထက်လျော့နည်းကြည့်ရှုညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဆက်စပ်မှုတို့အတွက်အရေးပါတဲ့တံခါးခုံကိုအဆင့်ဟုတ်မဟုတ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ လေ့လာမှုများအကြားကွာဟမှုမတူညီသောလူဦးရေ, သုတေသနဒီဇိုင်းများ, အဓိပ္ပာယ်, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစီအမံများထည့်သွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။17
ပထမဦးဆုံးအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမှာငယ်ရွယ်စဉ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အတူအနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့များရှိသည်ဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။18,33 ပထမဦးဆုံးအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမှာငယ်ရွယ်သောအသက်ငယ်ရွယ်သောညစ်ညမ်းကြည့်သော်လည်းမကြည့်ရှု၏လက်ရှိအကြိမ်ရေနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အများအပြားက Cross-Section လေ့လာမှုများတစ်ဦးနုပျိုအသက်အရွယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်စတင်အကြားဆက်ဆံရေးကိုထောကျပံ့။22,34-36 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ longitudinal သုတေသနနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးနုပျိုအသက်အရွယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏စတင်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်အစောပိုင်းထိတွေ့မှုနှင့်ညစ်ညမ်းစေရန်မကြာခဏထိတွေ့မှုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။14,15 သို့သော်ဤဆက်ဆံရေးဟာကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မဖြစ်မည်အကြောင်း, က pubertal အခြေအနေနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာခြင်းဖြင့်ရှက်ကြောက်လိမ့်မည်။
ညစ်ညမ်းဆင်းရဲစိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုအကြားတစ်ဦးကဆက်စပ်မှုယခင်ကမှတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆွီဒင်လေ့လာမှုများတွင်နေ့စဉ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူနီးပါး 20%, ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောအသုံးပြုသူများကို (12.6%) ထက်သိသိသာသာပိုပြီးစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။11 ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု frequency, အကျိုးသက်ရောက်စေအနုတ်လက္ခဏာနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်37 ငယ်ရွယ်လူတို့တွင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု,38 နှင့်လူငယ်အမျိုးသမီးရောဂါလက္ခဏာများ depressive ။39 ငယ်ရွယ်သောကလေးများအတွက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့ရေတိုရေရှည်ဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်;40 သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာဤနောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌ထိတွေ့မှုနှင့်ဆင်းရဲသောစိတ်ကျန်းမာရေး၏ငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့သရုပ်ပြဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်လိင်ပညာရေးဒီဇိုင်းများအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ရလဒ်များလူငယ်များ၏အများစုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားလုံးနီးပါးလုလင်တို့သည်မကြာခဏညစ်ညမ်းအားဝင်ရောက်ဖြစ်ကြောင်းပြီအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းအထက်တန်းကျောင်းလိင်ပညာရေးအစီအစဉ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ကိုင်တွယ်ကြောင်းအရေးကွီး၏။ ညစ်ညမ်းပထမဦးဆုံးလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်ထံမှစောင့်ကြည့်နေပါတယ်, ဒါကြောင့်အသက်အရွယ်-သင့်လျော်သောပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များရှိရာသို့အလျင်အမြန်မရရှိလျှင်, အထက်တန်းကျောင်း၏ပုံစံအနှစ်ကနေအကောင်အထည်ဖော်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို GLBQQ + အဖြစ်ဖော်ထုတ်သူတွေကိုညစ်ညမ်းပိုပြီးမကြာခဏနှင့်တစ်ဦးအငယ်အရွယ်ကနေစောင့်ကြည့်ကြောင်းပြသကဲ့သို့, heteronormative မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအမျိုးသမီးငယ်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းပျော်မွေ့မည်မဟုတ်ကြောင်းယူဆပါတယ်သင့်ပါဘူး။ ပညာရေးအစီအစဉ်များကိုထိုကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းအတွက်ဆန့်ကျင်အဖြစ်အစစ်အမှန်လောကရှိလိင်ကွဲစအိုလိင်ဆက်ဆံ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အလေ့အကျင့်အဖြစ်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်သင့်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းပညာရေးအစီအစဉ်များပေါ်ထွက်လာဖို့စတင်နေကြသည်နေချိန်မှာ;41,42 ဒီချဉ်းကပ်မှု၏ထိရောက်မှုကိုအဆုံးအဖြတ်မဆိုသုတေသနဖြစ်ရှိသေးရှိပါတယ်။10
သြစတြေးလျဥပဒညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရာမှ 18 အောက်မှာလူတွေတားမြစ်ထား;4 သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်လက်ရှိဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်ထံမှ access ကိုတားဆီးကြသည်မဟုတ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအသက်အရွယ်စိစစ်အတည်ပြုဆော့ဖ်ဝဲ, အင်တာနက်စီစစ်ခြင်း software နှင့်မိဘ၏စောင့်ကြည့်မှုအဖြစ်ကြားဝင်အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သောကလေးများတို့ညစ်ညမ်းမှပေါ့ပေါ့သို့မဟုတ်မတော်တဆထိတွေ့မှုလျှော့ချတစ်ကဏ္ဍမှပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤနည်းလမ်းများညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းမှတစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုငယ်ရွယ်သူတစ်ဦးရပ်တန့်အတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်မဟုတ်။2,43
ဆင်းရဲသောသူတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းအကြားဆက်စပ်မှုကိုလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါဟာညစ်ညမ်းဆင်းရဲသောသူသည်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ဒါမှမဟုတ်နောက်ခံပြဿနာများကိုတစ်ဦးညွှန်ပြချက်ဖြစ်တယ်လျှင်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုကိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့်အတူလူငယ်များ၏ကုသတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုညစ်ညမ်းအချို့ client များအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိစဉ်းစားရန်လိုပေမည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ် variable တွေကို၏အကဲဖြတ်အတွက်ကန့်သတ်မေးခွန်းများကိုညစ်ညမ်းစေရန်တမင်များနှင့်မတော်တဆထိတွေ့မှုများအကြားခွဲခြားခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမရှိရှင်းလင်းပြတ်သားစွာချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်သို့မဟုတ် contextualisation ပေးထားခဲ့ကြဘူးကြောင်းပါဝင်သည်။ နောက်ထပ်မရှိအသေးစိတ်ကြည့်ရှုအားပေးအကြောင်းအရာကြည့်ရှုသို့မဟုတ်အမျိုးအစားများအတွက်တွန်းအားအပေါ်စုဆောင်းခဲ့သည်။ အတိတ်သုတေသနဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအတွက်လျော့နည်းစိတ်ကျေနပ်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်နှင့်အမျိုးသမီးဆီသို့လိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားတွေရှိခြင်းအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တမ်းများတွင်မပါဝင်ခဲ့ညစ်ညမ်း၏အခြားအလားအလာဆက်စပ်မှု, ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။14 အခွားသောထိတွေ့မှုအစီအမံများဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုတစ်ခုတည်းကို item သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်, အတည်ပြုအကြေးကိုမသုံးခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုလည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပြုသဘောသက်ရောက်မှုသက်ဆိုင်သော variable တွေကိုမပါဝင်ခဲ့ချေ။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုဘက်လိုက်မှုနှင့် Self-တင်ဆက်မှုဘက်လိုက်မှုမှတ်မိဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်သော Self-အစီရင်ခံသတင်းအချက်အလက်များအပေါ်မှီခို။ အဆိုပါ Cross-Section သုတေသနဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်ညစ်ညမ်းနှင့်အခြားအချက်များအကြားမည်သည့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးမျိုး attribute မဟုတ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်တမ်းအထွေထွေလူဦးရေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သောအရာအွန်လိုင်းစုဆောင်းခဲ့ကွောငျးတစ်ဦးအဆင်ပြေနမူနာ, ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်လူငယ်များအကြားရှိအခြားဝိသေသလက္ခဏာများအကြိမ်ကြိမ်နှင့်အသက်အကြားဆက်နွယ်မှုများကိုစစ်ဆေးသည့်ပထမဆုံးသြစတြေးလျားလေ့လာမှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းကိုငယ်ရွယ်သောageစတြေးလျလူငယ်များအကြားတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြproblemsနာများ၊ ငယ်ရွယ်သောအချိန်တွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းစသည့်အန္တရာယ်ရှိသောရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းရန်လူငယ်များ၏ကျန်းမာရေးနှင့်အပြုအမူအပေါ်ပိုမိုတိကျသော longitudinal research လိုအပ်သည်။ ဤလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကလိင်ပညာရေး၌ထည့်သွင်းခြင်း၏အရေးကြီးမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
McKee အေညစ်ညမ်းထိခိုက်မှုလူငယ်များပါသလား Aust J ကို Community ။ 2010; 37: 17-36 ။
2 ဆိုက်ဘာပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ FSM MJ, Greentree S, Cocotti-Muller, Elias KA, Morrison S. Safety: အွန်လိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လုံခြုံရေးနှင့်ထိတွေ့မှု။ လူငယ် Soc ။ ၂၀၀၆; 2006: 38-135 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 47
3 Walker က S, Temple-Smith M, Higgs P, Sanci L. 'သင်၏မျက်နှာ၌အမြဲရှိနေသည်' - လူငယ်များသည် porn နှင့်ပတ်သက်သောအမြင်။ လိင်ကျန်းမာရေး။ ၂၀၁၅; 2015: 12-200 ။
4 Mason ဆို သြစတြေးလျအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပတ်သက်သောအမ်ဥပဒေပြုရေး။ ကင်ဘာရာ (AUST): ပါလီမန်န်ဆောင်မှုများပါလီမန်စာကြည့်တိုက်၏သြစတြေးလျဦးစီးဌာန, 1992 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 16
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 37
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 144
5 Wright PJ, Sun ကကို C, Steffen NJ, Tokunaga သည် RS ။ ညစ်ညမ်း, အရက်နှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးစိုး။ Community Monogr ။ 2014; 82: 252-70 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 324
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 31123
6 Arrington-Sanders R ကို, Harper ကို GW, မော်ဂန်တစ်ဦးက, Ogunbajo တစ်ဦးက, Trent M က, Fortenberry ဃလိင်တူချင်း-ဆွဲဆောင် Black ကဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2015; 44: 597-608 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 42
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 11
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 54
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 104
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 39
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 137
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 78
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 45
7 ပေါလုက B က, ရှိန်းပြား JW ။ ကျား, မ, ကိုထိခိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းများအတွက်တွန်းအား။ int J ကိုလိင်ကျန်းမာရေး။ 2008; 20: 187-99 ။
8 Gorman S က, ရဟန်းတော်-Turner အီး, ငါးဂျေအခမဲ့အရွယ်ရောက်အင်တာနက်ဝဘ်က်ဘ်ဆိုက်များ: ဘယ်လိုပျံ့နှံ့နေတဲ့လုပ်ရပ်များလျော့နည်းသွားစေကြသလော ကျားကိစ္စများ။ 2010; 27: 131-45 ။
9 Vannier SA, Currie AB, O'Sullivan LF ။ ကျောင်းသူ / သားများနှင့်ဘောလုံးမိခင်များ - အခမဲ့“ ဆယ်ကျော်သက်” နှင့်“ MILF” အွန်လိုင်းအပြာစာပေများကိုအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ J Sex Res ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 2014: 51-253 ။
10 Lim ကက MS, Carrotte ER, Hellard ME ။ ကျား, မ-based အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ်ညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်သုခချမ်းသာမှု၏သက်ရောက်မှု: ကြှနျုပျတို့ဘာသိရသလဲ J ကို Epidemiol အဝန်းကနျြးမာရေး။ 2015; 70 (1): 3-5 ။
11 Svedin CG, Åkermanငါညစ်ညမ်း၏ Priebe G. အမကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်။ ဆွီဒင်အထီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏ epidemiological လေ့လာမှုကိုအခြေခံသောတစ်ဦးကလူဦးရေ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်။ 2011; 34: 779-88 ။
12 Rothman EF, Kaczmarsky C, Burke N, Jansen E, Baughman A. “ porn မပါဘဲ၊ ငါအခုသိတဲ့တစ်ဝက်ကိုမသိဘူး” - မြို့ပြ၊ ဝင်ငွေနည်းသော၊ အနက်ရောင်နှင့်လူကြိုက်များသောနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်း။ ဟစ်စပန်းနစ်လူငယ်။ J Sex Res ။ ၂၀၁၅; 2015 (52): 7-736 ။
13 Marston က C, ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်လူငယ်များနှင့်ဂယက်ကြားတွင် Lewis က R. စအို heterosex: ဗြိတိန်အတွက်တစ်ဦးကအရည်အသွေးလေ့လာမှု။ BMJ Open ။ 2014;4(8): e004996 ။
14 ဘရောင်း JD, L'Engle KL ။ X သတ်မှတ်ချက် - အမေရိကန်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်စိတ်သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ။ Communic Res ။ 2009; 36: 129-51 ။
15 Vandenbosch L ကို, Eggermont အက်စ်လိင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်: အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးများနှင့် pubertal status ကို၏စိစစ်အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို Res မြီးကောင်ပေါက်။ 2013; 23: 621-34 ။
16 Harkness EL, Mullan BM, Blaszczynski အေအသင်းမှညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစားသုံးသူများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေအကြား: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw ။ 2015; 18: 59-71 ။
17 ပတေရုသ J ကို, Valkenburg pm တွင်။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်ညစ်ညမ်း: သုတေသန 20 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ J ကိုလိင် Res ။ 2016; 53: 509-31 ။
18 Vella လေး, Agius PA ဆိုပြီး, Bowring AL, Hellard ME, Lim က MSc ။ ပထမဦးဆုံးလိင်မှာအစောပိုင်းအသက်အရွယ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အတူအသင်းနှင့်မဲလ်ဘုန်းမြို့မှာနေတဲ့လူငယ်ဂီတပွဲတော်တက်ရောက်တဲ့နမူနာအကြား sociodemographic အချက်များ။ လိင်ကျန်းမာရေး။ 2014; 11: 359-65 ။
19 Rabe-Hesketh S က, Pickled တစ်ဦးက, တေလာ C. Generalized linear ငုပ်လျှိုးနေနှင့်ရောထွေးမော်ဒယ်များ။ Stata Tech မှ Bull ။ 2000; 53: 293-307 ။
20 ORDINAL Logistic ဆုတ်ယုတ်များအတွက်အချိုးကျလေးသာမှုပုံစံထဲမှာအချိုးညီမျှမှုအကဲဖြတ် Brant R. ။ biometric ။ 1990; 46: 1171-8 ။
21 ကော့ DR ။ Regression မော်ဒယ်များနှင့်အသက်-စားပွဲ။ JR Stat Soc စီးရီး B ကို Stat Methodol ။ 1972; 34: 187-220 ။
22 Rissel ကို C, ရစ်ချတာကို J, က de Visser ro, McKee တစ်ဦးက, Yeung တစ်ဦးက, Caruana T. သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးကပရိုဖိုင်း: ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေး၏ဒုတိယသြစတြေးလျလေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်။ J ကိုလိင် Res ။ 2017; 54: 227-40 ။
23 ရစ်ချတာကို J, et al က de Visser ro, Badcock PB, Smith က AMA, Rissel ကို C, Simpson JM ။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, လိင်နှင့်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများများအတွက်ပေးဆောင်: ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရေး၏ဒုတိယသြစတြေးလျလေ့လာမှု။ Sexl ကနျြးမာရေး။ 2014; 11: 461-71 ။
24 လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသြစတြေးလျသုတေသနစင်တာကို။ သြစတြေးလျအတွက်လိင်: ကျန်းမာရေးနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏သြစတြေးလျလေ့လာမှု၏အနှစ်ချုပ်တွေ့ရှိချက်။ မဲလ်ဘုန်း (AUST): LaTrobe တက္ကသိုလ်; 2003 ။
25 ဆဗီးနားကို C, Wolak J ကို, Finkelhor ဃလူငယ်များအတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏သဘောသဘာဝနှင့်ဒိုင်းနမစ်။ Cyberpsychol ပြုမူနေ။ 2008; 11: 691-3 ။
26 ပတေရုသ J ကို, Valkenburg P. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုနှင့်၎င်း၏ antecedents: ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးတစ်ဦးက longitudinal နှိုင်းယှဉ်။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2011; 40: 1015-25 ။
27 Luder MT, Pittet ငါ Berchtold တစ်ဦးက, Akre ကို C, Michaud PA ဆိုပြီး, Suris JC ။ မြီးကောင်ပေါက်အကြားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့များ: သွန်သင်ချက်အမှားသို့မဟုတ်အဖြစ်မှန်? Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2011; 40: 1027-35 ။
28 Kendall CN ။ လိင်တူချစ်သူအထီးလူငယ်ပညာပေး: ညစ်ညမ်း Self-လေးစားမှုဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းအခါကတည်းက? J ကို Homosex ။ 2004; 47: 83-128 ။
29 McBride KR, Fortenberry ဃလိင်ကွဲစအိုလိင်နှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံအပြုအမူတွေ: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ J ကိုလိင် Res ။ 2010; 47: 123-36 ။
30 Braithwaite SR, ပေးသနားတျောမူ, Brown က J ကို, Fincham အက်ဖ် hookups စဉ်အတွင်းကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့်မူးယစ်နှင့်ဆက်နွယ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလား? အစွန်းရောက်ကျန်းမာရေးလိင်။ 2015; 17 (10): 1155-73 ။
31 Braun-Courville DK, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူမှ Rojas အမ် Exposure ။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး။ 2009; 45: 156-62 ။
32 ပတေရုသ J ကို, Valkenburg pm တွင်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးတစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ J ကိုကနျြးမာရေး Community ။ 2011; 16: 750-65 ။
33 Sandfort TG, Orr က M, Hirsch က JS, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အချိန်ကိုက်၏ Santelli ဂျေ long-term ကျန်းမာရေးဆက်စပ်မှု: တစ်အမျိုးသားရေးကိုအမေရိကန်လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို။ J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖြစ်၏။ 2008; 98: 155-61 ။
34 Haggstrom-Nordin အီး, Hanson ဦး, Tyden တီအသင်းဆွီဒင်တွင်မြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အကြား။ int J ကို STD AIDS ရောဂါ။ 2005; 16: 102-7 ။
35 Morgan EM ။ ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်သူများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုများ၊ အပြုအမူများနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုများ။ J Sex Res ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ 2011: 48-520 ။
36 Weber M, Quiring O, Daschmann G. Peers, မိဘများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ - ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ဆိုင်ရာဖော်ထုတ်ထားသည့်အကြောင်းအရာနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်မှုဆက်စပ်မှုများကိုစူးစမ်းခြင်း။ လိင်ကိစ္စ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ 2012: 16-408 ။
37 Tylka TL ။ ကြည့်မှန်ထဲမှာမှန်၊ အမျိုးသားများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများ၊ ကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်နှင့်သုခချမ်းသာ။ Psychol ယောက်ျား Masc ။ ၂၀၁၅; 2015: 16-97 ။
38 ME Levin, Lillis J ကို, ဟေးယက် SC ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကောလိပ်အထီးအကြားပြဿနာကြည့်ရှုသောအခါ? အတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်း၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ဍဆန်းစစ်ပါ။ လိင်စွဲ compulsive ။ 2012; 19: 168-80 ။
39 Willoughby BJ, ကာရိုး JS, နယ်လ်ဆင် LJ, Padilla-Walker က LM ။ အမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြား relational လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ညစ်ညမ်းလက်ခံမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များ။ အစွန်းရောက်ကျန်းမာရေးလိင်။ 2014; 16: 1052-69 ။
40 အွန်လိုင်းသြစတြေးလျကလေးများနှောင့်အယှက်အဘယ်အရာကိုအစိမ်းရောင်, L, Brady: D, Holloway: D, Staksrud အီး, Olafsson K. ? ကလေးများအနိုင်ကျင့်, Porn နှင့်အကြမ်းဖက်မှုအပေါ်မှတ်ချက်။ Kelvin Grove (AUST): ကို Creative Industries, နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု Excellence ၏ ARC ရေးစင်တာ; 2013 ။
41 Tarrant အက်စ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်သင်ကြားပြသမှုအတတ်ပညာ: သင်ကြားမီဒီယာစာတတ်မြောက်ရေး။ ခုနှစ်တွင်: Comella L ကို, Tarrant S က, အယ်ဒီတာများ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပေါ်နယူး Views: လိင်, နိုင်ငံရေးနှင့်ဥပဒေ။ စန်တာဘာဘရာ (CA): Praeger; 2015 ။ စ။ 417-30 ။
42 Limmer အမ်လူပျိုနှင့်ညစ်ညမ်း: လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးပညာရေးမှတဆင့်စိန်ခေါ်မှုအစည်းအဝေး။ Education ကနျြးမာရေး။ 2009; 27: 6-8 ။
43 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအွန်လိုင်းကြည့်ရှု Smith ကအမ်လူငယ်: မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဆင် Addressing ။ လိင် Res လူမှုရေးပေါ်လစီ။ 2013; 10 (1): 62-75 ။